I-Clicky WordPress Plugin ene-Admin ekhishwe | Martech Zone
NgoLwesine, Juni 14, 2007 NgoLwesithathu, July 4, 2007 Douglas Karr
Clicky limnandi impela analytics isicelo esenza umqondo ophelele kumsebenzisi oyisisekelo kunanoma yibaphi abafana abakhulu laphaya. Ngicabanga ukuthi imakethe encane iyi-niche enkulu futhi uClicky kufanele abe ngumnikazi wayo maduzane - ithole i- isikhombimsebenzisi esibushelelezi, ihluzo ezinhle, nolwazi olukhombisayo luphelele kubhulogi ojwayelekile.
Isikhashana ubuyile, u-Clicky ukhiphe i-WordPress Plugin ukuze ashumeke i-Clicky ibe yi-WordPress. USean wenze inothi ekhasini lakhe leGoodie ukuthi ubengazi kakhulu ngeWordPress futhi ubengathanda ukuthi ngabe wakhe ikhasi lokufaka isicelo ngaphakathi kwesixhumi esibonakalayo se-WordPress Admin, kepha ubengazi ukuthi kanjani ngaleso sikhathi. Wangihlaba umxhwele ngempela umsebenzi owawusuvele wenziwe kwaClicky ngakho ngabashiya umugqa ukuze ngibone ukuthi ngingasiza yini. Impendulo ibithi 'impela'!
Ngamahora ambalwa ngaleyo mpelasonto, ngakha ikhasi elihle lomqondisi elinezici zonke ezidingekayo. USean wayigqokisa futhi wayifaka isitayela (kahle) ngaphezulu kuClicky futhi unayo uyikhiphe namuhla! Akuvamile ukuthi uthole ithuba lokusiza kanjena - kepha ngithanda kakhulu ukubona uhlelo olunjengoClicky lwamukelwa ngokujwayelekile. Yilokho okushiwo ukusebenzisana komthombo ovulekile, akunjalo?!
Zitholele i- I-Clicky Web Analytics akhawunti bese ulanda ifayela le- I-Clicky WordPress Plugin.
Ngilahlekile ngaphandle Kwakhe
Jun 14, 2007 ku-5: 02 PM
Ngibe nezinkinga ezimbalwa zokuthembeka nge-getclicky ezinyangeni ezimbalwa emuva kepha bekubonakala ukuthi bakulungisile konke lokhu futhi manje sebebuyisele ukukusebenzisa. Eqinisweni ngibhalisele iphakethe labo le-'blog 'ukuthi i- $ 19 ngonyaka ikunikeze izibalo ezigcwele eziningiliziwe zamabhulogi ama-3 engicabanga ukuthi ukuthengiselana.
Ngokuqinisekile ngizozama i-plugin.
UJun 15, 2007 ngo-1: 56 AM
Omunye umsebenzi omuhle uDoug. Uba ngumpetha manje ngama-plugins we-WordPress WordPress